Ciidan caddaan oo hawlgal ka fuliyay Gobolka Jubbada Dhexe – Balcad.com Teyteyleey
Ciidan caddaan oo hawlgal ka fuliyay Gobolka Jubbada Dhexe
Wararka ka imaanaya Degmada Jilib ee Gobolka Jubada Dhexe ayaa ku waramaya in Ciidamo ajaanib ah iyo kuwa Dowladda Soomaliya in weerar ay ka ku qaadeen Xalay saqdii dhexe Saldhig Ciidamada Xarakada Al-shabaab ay ku lahaayeen tuulada Welmarow ee degmadaas u dhow.
Dadka deegaanka Welmarow oo u dhow degmada Jilib ee Gobolka Jubada Dhexe ayaa xaqiijiyay in howlgalka uu ahaa mid qorshaysan islamarkaana Ciidamada ajaanibta ay ku bartilmaameedsadeen Saldhiga Al-shabaab.
Lama oga qasaaraha halkaas ka dhashay iyo sida Ciidamada ajaanibta iyo kuwa Dowladda Soomaliya ay u fuliyeen weerarka lagu qaaday Saldhig Ciidamada Xarakada Al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Welmarow ee degmada Jilib u dhow, balse Ciidamada huwanta ayaa mar walba dhanka dhulka iyo cirka ka weerara Al-shabaab.
The post Ciidan caddaan oo hawlgal ka fuliyay Gobolka Jubbada Dhexe appeared first on Ilwareed Online.
Faahfaahin Weerarkii ka dhacay London “Sawirro”